सभापति देउवा र पौडेलकै प्रदेशमा कांग्रेसको पराजय: प्रतिनिधिसभा तर्फ कहाँ-कति सिट ? - KTMreports.com
पत्रपत्रिकाबाट २६ मंसिर २०७४, मंगलवार १०:५५ 167 पटक हेरिएको
काठमाडाैँ : प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नै गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट विजयी भए । तर, यस प्रदेशका बाँकी १५ सिटमा कांग्रेसलाई विजयी बनाउन सकेनन् । रमेश लेखक, एनपी, सावद, वीरबहादुर बलायर, रामजनम चौधरी, आरजु राणा र मोहनसिंह राठोरले जित्ने कांग्रेसको दाबी गलत साबित भयो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रदेश–४ मा एमाले र माओवादीको दाँजोमा धेरै सिट जितेको थियो । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृहजिल्ला भएकाले पनि यहाँ कांग्रेसलाई बलियो मानिएको थियो तर पौडेल आफैँ हारे । यस प्रदेशअन्तर्गत स्याङ्जा जिल्लाका दुई निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना बाँकी रहँदा कांग्रेसले एक सिट मात्रै जितेको छ । नवलपुरबाट कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराला विजयी भए ।
१५३ प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले अहिलेसम्म २१ ठाउँमा मात्र जित हात पारेको छ । मतगणना भइरहेका सुनसरी–३, कञ्चनपुर–३ र सर्लाही–२, स्याङ्जा–१ र स्याङ्जा–२ मा भने कांग्रेस प्रतिस्पर्धामै छ । तसर्थ, कांग्रेसले केही सिट बढाउने सम्भावना बाँकी छ ।यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
प्रतिनिधिसभातर्फ कहाँ–कति सिट ?
प्रदेश ६ मा शून्य
मोरङ–२ मीनेन्द्र रिजाल
सुनसरी–४ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
सुनसरी–२ सीताराम मेहता
उदयपुर–१ नारायण खड्का
सिरहा–१ प्रदिप गिरि
रौतहट–२ अफताब आलम
रौतहट–४ देवप्रसाद तिमल्सेना
सप्तरी–४ तेजुलाल चौधरी
बारा–१ उमाकान्त चौधरी
काठमाडौं–१ प्रकाशमान सिंह
काठमाडौं–४ गगनकुमार थापा
काठमाडौं–६ भीमसेनदास प्रधान
काठमाडौं–१० राजन केसी
रसुवा ः मोहन आचार्य
नवलपुर–१ शशांक कोइराला
रुपन्देही–४ प्रमोदकुमार यादव
रुपन्देही–५ भरत शाह
नवलपरासी–२ देवेन्द्रराज कँडेल
बर्दिया–१ सञ्जय गौतम
कपिलवस्तु–३ अभिषेकप्रताप शाह
डडेल्धुरा ः शेरबहादुर देउवा
दोस्रो दल बन्ने सम्भावना
एमाले ७४ सिट जितिसकेको छ भने ५ वटामा अग्रता लिइरहेको छ । प्रत्यक्षमा ८० जित्दा समानुपातिकमा ४० सिट जिते एमालेको सिट संख्या १२० पुग्नेछ । एमाले पहिलो दल हुने सुनिश्चित भइसक्दा कांग्रेसले मुस्किलले दोस्रो दल बन्ने सम्भावना कायम राखेको छ । माओवादीले ३४ प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेको छ र दुईवटामा अग्रता लिएको छ । यी दुई जितसहित समानुपातिकमा १५ सिट जित्दा ५० देखि ५२ सम्म बनाउन सक्नेछ । तर, कांग्रेसले यस्तोमा समानुपातिकमा बढीमा ४० जित्दा प्रत्यक्षका २१ गरी ६० को हाराहारी सिट जित्नेछ । यस्तो अवस्थामा माओवादीभन्दा कांग्रेस अघि हुनसक्ने छ । यद्यपि, समानुपातिकको मत आउने क्रम जारी छ ।
प्रदेश सभातर्फ कहाँ कति सिट ?
प्रदेश सभातर्फ प्रदेश नम्बर १ का ५६ सिटमा कांग्रेसले ६ मा जितेको छ भने एकमा अग्रता लिएको छ । प्रदेश नम्बर २ का ६४ प्रदेश सभामा कांग्रेसले ८ वटामा मात्रै जितेको छ । प्रदेश नम्बर ३ का ६४ प्रदेश सभामा कांग्रेसले सातवटामा जित दर्ता गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर ४ का ३६ प्रदेश सभामा कांग्रेसले ५ वटामा जितेको छ । प्रदेश सभा ५ मा ५, प्रदेश नम्बर ६ का २४ मा एउटा, प्रदेश ७ का ३२ सिटमा कांग्रेसले ५ वटा मात्रै प्रदेश सभा सदस्य जितेको छ ।
प्रदेश–६ मा शाही मात्र
कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश–६ मा एमाले र माओवादीसँग बराबर तह जितेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६ नम्बर प्रदेशका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले एक सिट पनि जित्न सकेन । २४ प्रदेश सभाका सदस्यमा हुम्ला ‘ख’ बाट जीवनबहादुर शाहीले जित्नु नै सिंगो ६ प्रदेशमा एक मात्र सिट हुन पुग्यो ।